Umkhiqizi kanye Nomphakeli Wezimpahla ZaseLwandle Wholesale | Ngesikhathi
Insizakalo yethu yokukhetha nokupakisha iwasize kanjani amakhasimende? Sinikezela ngezinsizakalo ezigcwele ezenziwe ngezifiso ukuhlangabezana nezidingo zebhizinisi lakho! 99.6% ukukha izinga lokunemba elihlanganiswe ngokuphelele newebhusayithi yakho futhi lithengise ...
Insizakalo yethu yokukhetha nokupakisha iwasize kanjani amakhasimende?
Sinikezela ngezinsizakalo ezigcwele ezenziwe ngezifiso ukuhlangabezana nezidingo zebhizinisi lakho!
99.6% ukukha isilinganiso sokunemba
Kuhlanganiswe ngokuphelele newebhusayithi yakho kanye namapulatifomu wokuthengisa
Ukubuyekezwa kokulawulwa kwesitoko okuzenzakalelayo
Kunezinketho ezimbalwa ongazithola maqondana nokuthi siwathola kanjani ama-oda wakho wokucubungula.
Okukhethwa kukho kumakhasimende ethu amaningi ukuvumela ukuhlanganiswa kwe-API kohlelo lwethu lweWarehouse Management System (WMS) nezinkundla zokuthengisa abazisebenzisayo okusho ukuthi: Shopify, Amazon, Magento, WooCommerce njll. ukuthumela.
Siyaziqhenya ngezinga lethu eliseduze lokukhetha ukunemba. Sisebenzisa ubuchwepheshe bebhakhodi ukukhetha ama-oda futhi iqembu lethu lithola ukuqeqeshwa okunzulu futhi ama-oda ahlala ehlolwa kabili ngaphambi kokuthumela.
Sifaka izinto eziningi zokupakisha ezibandakanya amabhokisi ahlukahlukene, izimvilophu ezinamaphiko ezisongelayo kanye nabavikeli bamakhona. Ithimba lethu linolwazi oluningi lokuqinisekisa ukuthi zonke izimpahla ezithunyelwe zihlanganiswe ngendlela efanele, zifakwe uphawu olufanele ngemininingwane yenkampani yakho futhi kufakwa nezinye izinto zokumaketha / ukufaka.
Wamukelekile ukuhlinzeka ngokufaka kwakho, noma singakusiza ukuthi uzenzele okwakho ukupakisha okwenziwe uphawu eChina ngokuya ngezidingo zakho.
Amanye amakhasimende ethu abambe iqhaza ekusatshalalisweni kwezimpahla zabo kanye nokuthengiswa kwe-Amazon FBA. Sinolwazi ekupakisheni ama-oda wenqwaba exubile.
Ithimba lethu lokugcina izimpahla linamakhono okufeza ukuthunyelwa ezikhungweni ze-Amazon FBA futhi ukusebenzisa ulwazi lwabo nolwazi lwabo kungakunika izindlela ezingabizi kakhulu nezilula zokusabalalisa.
Lapho amakhasimende edinga izinto ezahlukahlukene ezahlukahlukene (i-SKU) ukuthi zithunyelwe ndawonye, ​​singahlela kalula futhi ngokunembile lawa ma-oda futhi siphakamise indlela yokuthumela ephumelela kunazo zonke kunoma iliphi izwe eliya khona.
Umkhumbi ngosuku olufanayo
Ukukhethwa nokuthunyelwa ngesikhathi esifanele kubalulekile ku-e-commerce. Singakhetha, sipake futhi sithumele yonke imiyalo oyithola ngaphambi kuka-4: 00 ntambama ngesikhathi saseBeijing ngosuku olufanayo, ukuze ukwazi ukuwathumela emhlabeni wonke ngomzila wokuthumela owuthandayo.
Lokhu futhi kungasiza kakhulu ekufezeni imikhankaso emikhulu exhaswe yisixuku, lapho yonke imiyalo yakho idinga ukuthunyelwa ngokushesha. Sinokuhlangenwe nakho kokusebenza nemikhankaso yeKickstarter kanye ne-Indiegogo eletha imiphumela emihle kakhulu kumakhasimende ethu nakwabaxhasi bawo.
Langaphambilini Ukulethwa Kwezitimela
Olandelayo: Izindiza Zezindiza